विश्वकप विशेष - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
साउन ९ गते, २०७५ - ११:२६
फिफा वर्षको उत्कृष्ट खेलाडिमा को-को परे ? महँगो खेलाडी नेयमार परेनन्
काठमाडौँ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले फिफा वर्ष खेलाडीका लागि १० जनाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ । फिफाले मंगलबार राति सन् २०१७–१८ का लागि १० खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो । फिफाले सार्वजनिक गरेको...
साउन २ गते, २०७५ - १२:०१
विश्वकपको फाइनल खेलमा मैदानमा छिर्ने यी महिला को हुन् ? दिइयो यस्तो सजायँ
फिफा विश्वकपको फाइनल खेल भइरहेका बेला मैदानमा छिर्ने रुसकी महिला संगठन Pussy Riot का चार सदस्यलाई १५ दिनसम्मका लागि जेलमा राखिएको छ । यसका साथै यो संगठनमाथि कुनै पनि स्टेडियममा खेल हेर्नका लागि तीन वर्षको प्रतिबन्धको...
साउन १ गते, २०७५ - २०:५२
पेरिस, १ साउन । रुसको मस्कोमा भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता फ्रान्सका फुटबल टोलीलाई देशकै सर्वोच्च सम्मान ‘लिजन दि अनर’ प्रदान गरिने भएको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति एम्यानुएल माक्रोँको कार्यालयले...
असार ३२ गते, २०७५ - ११:३१
यी हुन् २१ औं विश्वकपका रोचक घटना
रुसमा भएको २१ औं संस्करण विश्वकप फुटबल सम्पन्न भएको छ । आइतबार राति फ्रान्स र क्रोएसियाबीचको फाइनल खेलसँगै विश्वकप सम्पन्न भएको हो । अब फुटबलको महाकुम्भ २०२२ मा कतारमा हुने छ । यो पटकको विश्वकपमा विभिन्न ऐतिहासिक...
असार ३१ गते, २०७५ - १५:२६
यी हुन् क्रोएसियाले विश्वकप जित्न सक्ने कारण
आज २१ औं संस्करण विश्वकप अन्तर्गतको अन्तिम दिन, अर्थात आज उपाधि भिडन्त । ट्रफि प्राप्त तथा नयाँ इतिहास कोर्नका लागि पूर्व विजेता फ्रान्स र पहिलो पटक फाइनल पुग्न सफल क्रोएसिया भिड्ने छन् । खेल नेपाली समय अनुसार साँझ...
असार ३१ गते, २०७५ - ११:३२
मस्को । २१ औं संस्करणको विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि आज फ्रान्स र क्रोएसिया भिड्दै छन् । दुबै टिम आज उपाधि जितेर नयाँ इतिहास रच्न चाहन्छन् । यी दुवै टिमबीच सन् १९९८ को विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो...
असार ३० गते, २०७५ - १४:४०
विश्वकप: फ्रान्स र क्रोएसियामध्ये को अब्बल ? यस्तो छ बिगत
काठमाडाैं । आइतवार हुने विश्वकप फाइनलमा पहिलो पटक उपाधि चुमेर इतिहास रच्ने लक्ष्य लिएको क्रोएसियाले दोस्रो पटक विश्वकप विजेता बन्न आतुर फ्रान्सको सामना गर्दैछ । तेस्रो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको फ्रान्सले...
असार ३० गते, २०७५ - ११:१०
विश्वकपः बेल्जियम भर्सेस इंग्ल्याण्ड, को पुग्ला तेस्रो स्थानमा ?
काठमाडौं। रुसमा जारी विश्वकप फुटल अन्तर्गत आज तेस्रो स्थानका लागि बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड खेल्ने भएका छन् । यी दुवै टिमको लक्ष्य हुने छ विश्वकपको तेस्रो हुँदै सुखत अन्त्य गर्ने । समूह जी मा रहेका दुवै टोलीले समूह...
असार २९ गते, २०७५ - १०:५०
विश्वकपमा को-को खेलाडी छन् गोल्डेन बलको दौडमा ?
मस्को । रुसमा जारी २१औं संस्करणको विश्वकप फुटबल समापन हुन अब केही दिन मात्रै बाँकि छ । अविश्सनीय नतिजा आएको यो पटकको विश्वकपको उपाधिका लागि युरोपका दुइ देश भिड्दै छन् । उपाधि भिडन्त फ्रान्स र क्रोएसियाबीच हुने...
असार २८ गते, २०७५ - १६:१३
नाजीहरुको कब्जामा रहेको क्रोएसियाबारे फुटबलमा लुकेको संघर्षको कथा
विश्वकप फुटबल सुरु हुँदै गर्दा विश्वभरका फुटबल प्रशंसक ब्राजिल, अर्जेन्टिना, जर्मनी तथा पोर्चुगलको गुणगान गाइरहेका थिए । नगाउन् पनि किन यी सबै टिम स्टार खेलाडीले भरिपूर्ण छन् । तर जब जब विश्वकप सुरु भयो, अप्रत्याशित...